Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Rhino Tourism webatara na Tanzania Mkomazi Park
omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Njem Nleta Rhino
Edere Mkomazi National Park dị na Northern Tanzania maka Rhino Tourism, na-elekwasị anya ndị njem nleta nwere mmasị ịlele rhino ojii Africa fọdụrụnụ, ugbu a ụdị anụ ọhịa kachasị egwu n'ụwa.
Mịnịsta na-ahụ maka ihe ndị sitere n'okike na njem nlegharị anya na Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, bidoro Rhino Tourism na Mkomazi National Park na Wednesde n'izu a
Ministri ahụ nwere olile anya ịchụso ma dọta ndị njem nleta nwere mmasị ịga na foto rhino safaris.
Onye ozi ahụ kwuru na iwebata Rhino Tourism bụ akụkụ nke atụmatụ gọọmentị Tanzania.
Ebumnuche gọọmentị bụ ịdọta ndị njem nleta nde 5 nke ga - eme ka mmụba nke njem site na ijeri $ 2.6 $ na $ 6 ugbu a site na afọ 2025.
Ebe a dị na Northern Tanzania's Tourist Circuit n'akụkụ ugwu Kilimanjaro, e guzobe Mkomazi National Park dị ka Ebe Rhino ebe ndị njem nlegharị anya n'akụkụ ụwa niile nwere ike ịga wee lelee rhino ojii Africa a na-adịghị ahụkebe echekwara n'ime ogige ahụ.
Mkomazi dị n'okpuru njikwa nke Ogige Ntụrụndụ Tanzania (Tanapa). Ọ dị ihe dịka 112 kilomita n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Moshi na mpaghara Kilimanjaro, n'etiti sekit safari ugwu na ndịda.
Enwere ike ijikọta njem nlegharị anya nke ọma na njem nke ugwu Usambara ma ọ bụ Pare dị nso na ụbọchị ole na ole na-atụrụ ndụ n'ụsọ Oké Osimiri India nke Zanzibar.
Nchekwa Rhino bu isi okwu ndi oru nchekwa na-ele anya iji hu na ha biri n'Africa mgbe ha gbususoro oke onu ogugu n'ime onu ogugu ha.
Rhinos ojii so n'ime anụmanụ ndị kacha dị ize ndụ ma nọrọ n'ihe ize ndụ na East Africa ebe ọnụ ọgụgụ ha na-ebelata n'ike n'ike.
Na-ele ugwu ugwu Kilimanjaro na ugwu na Tsavo West National Park dị na Kenya na ọwụwa anyanwụ, ogige Mkomazi bụzi ogige izizi anụ ọhịa mbụ na East Africa pụrụ iche maka njem nlegharị rhino.